रामेछापको गौश्वाराले विकासको फड्को मार्दै - Samriddha Online
समृद्ध अनलाईन २ आश्विन २०७८, शनिबार ०५:०२ मा प्रकाशित ( ४ हफ्ता अघि) ६४९४४ पाठक संख्या
वडाका हरेक विकासमा जनप्रिय बन्दै वडाअध्यक्ष टलक
रामेछाप, असोज १ गते । रामेछापको दोरम्वा गाउँपालिकाको वडा नं.४ गौश्वाराका वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर मगर “टलक” सामान्य समान्य परीवारमा जन्मिएका हुन् । उनि सानै उमेर देखि समाज परिवर्तनको लागि अग्रसर भइ रहन्थे । दलित तथा जनजातीको बाहुल्यता रहेको गौस्वारामा दैनिक जसो मादक पदार्थ सेवन गरेर झैझगडा र होहल्ला हुन गर्दथ्यो तर अहीले गाउँमा यस्तो देखिन्न ।
लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन रहेको स्थानीय निकायमा राज्य पुनसंरचना पस्चात जनप्रतिनिधि पाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि कतिपय स्थानीय तहले विकासको काँचुली फेरेका छन् । यस क्रममा रामेछापको दोरम्वा गाउँपालिका वडा नं. ४ ले पनि शिक्षा स्वासथ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्दै आएको छ ।
गौश्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा पिछडिएको ठाउँ हो । यस ठाउँमा दलित र जनजातीको बाहुल्यता रहेको छ । वडामा रहेका १२ सय १६ परिवार मध्य १ हजार ४० जनाजाती र १५० दलित र केही परिवार क्षेत्री ब्राम्हण समुदायको बसोवास रहेको छ ।
०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गौश्वाराले पनि जनप्रतिनिधि पायो । निर्वाचनमा समाजमा सामाजिक काम गरि रहेका युवा टलक सबैको मनमा बस्न सफल भए । अघि देखि समाजिक कार्यमा तल्लिन युवा चन्द्रबहादुर मगर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पछि गाउँको मुहार फेरीएको छ । मगरले गाउँलाई निर्वाचन पछाडी विकासका काममा परिवर्तन गरेका छन् ।
पतिबद्धता पुरा गर्दै टलक
स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा आफ्ना मतदाता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरु वडा नं. ४ गौश्वाराका वडा अध्यक्ष टलकले धमाधम पुरा गर्दै आएका छन् । वडा अध्यक्ष मगरले आफू निवाचित भए पछि विशेष गरि शिक्षा स्वास्थ्य सडक निर्माणमा हरेक टोलटोलमा सडक पुर्याएको बताउँछन् । उनि निर्वाचित भए पछि वडामा रहेका ६ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा भौतिक निर्माण भएका छन् ।
निर्वाचन बेला हरेक घरघरमा पानी, बत्ती, टोलटोलमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको मादक पदार्थ नियन्त्रण तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको र ति प्रतिबद्धता पुरा गर्न तल्लिन रहेका उनि बताउँछन् । उनि राजनीतिक मात्र नभएर समाजिक क्षेत्रमापनि सक्रिय युवा हुन् । निर्वाचित भए पस्चात वडामा छडपटाउँदै मर्नु पर्ने अवस्थाका महिला तथा विरामीहरुलाई आफ्नो पहलमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाण्डौ पठाउने उदाहरणीय काम संगै समाज परिवर्तनका लागि गाउँमा लागि परि रहेका छन् । कोही विरामी परेको अवस्थामा गाडीबाट उपचारका लागि लग्न सम्भव नभएको अवस्थामा मगरले आफ्नै पहलमा हेलीकप्टर चार्टर गेर उपचार गर्न पठाएका छन् । उनले वडामा युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यक्रमहरु ल्याएर यसवा सामु पनि लोकप्रिय बनेका छन् ।
दलित जनजाती बाहुल्यता रहेको गौश्वारामा जाँडरक्सी नियन्त्रणमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन् । मगर गाउँपापलिकाको लोकप्रीय वडा अध्यक्षका रुपमा रहेका छन् । आफ्नो वडामा हिजोको तुलनामा आफुले घोषणपत्र अनुसार काम गरेकै कारण परिवर्तन भएको र आफुले हरेक कुराहरु जनताको सल्लाहअनुसार आफुले काम गरि रहेका कारण जनताले माया गर्नु भएको उनि बताउँछन् । हिजोको समयमा वडामा जनताले सानो काम गर्नलाई पनि सदरमुकाम पुग्नु पर्ने अवस्थामा निर्वाचन भएको र जनताको हरेक काम वडाबाट हुन लागेका कारण पनि जनताले आफुलाइ माया गरेको उनको भनाइ छ ।
विकास निर्माणमा काँचुली फर्दै गौश्वारा
स्थानीय निर्वाचन भन्दा अघि गौश्वारा जिल्ला कै विकट स्थानका रुपमा चिनिएको स्थान हो । तर निर्वाचन पछि गौश्वाराले विकासमा फड्को मारेको छ ।
निर्वाचन पछि गाउँमा सडक बनेको छ । टोल टोलमा सडक बने पछि गाउँमा घण्टौं पिठ्युँमा भारी बोक्नु पर्ने बाध्यता हटेर गएको छ । सर्वसाधरणले हरेक समान गाउँमै पाएका छन् । हिजो जस्ताको टहरा तथा बाँसको भकारी मुनी बसेर पढ्नु पर्ने बाध्यता हटेर गएको छ विद्यालय भवन बने पछि । अहिले वडामा रहेका ६ वटा विद्यालयमा पक्कि भवन बनेका छन् ।
विकास निर्माण र राजनीतिमा निस्वार्थ भएर लाग्ने हो भने थोरै बजेटले पनि वडामा धेरै विकासका कामहरुमा सफल हुन सकिने उदाहरण बन्दै गएको छ गौश्वारा ।
यहाँ जिल्ला कै पर्यटकिय क्षेत्र सैलुङ रहेको छ । दोलखाको सैलुङ र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका तथा दुयृ जिल्लाको सिमा क्षेत्रको रुपमा रहेको शैलुङ केही समय सिमा विवादका कारण कससले यहाँको विकाकस गर्ने भन्ने अन्योल रहेको भए पनि अहिले शैलुङको विकासका लागि दोरम्बा अग्र भइ रहेको छ ।
प्राकृतिक रुपमा निर्मित सयवटा थुम्काबाट सैलुङ बनेको छ । सयवटा थुम्का भएकै कारण यसलाई सैलुङ भनिएको हो । चिसो मौशममा हिउँ पर्ने सैलुङ हिउँ खेल्न र प्राकृतिक मनोरम, जंगल तथा हिमालको दृश्यावलोकनको लागि पनि त्यतिकै रमणिय छ । धार्मीक हिसावले पनि सैलुङ हिन्दु र वौद्ध धर्मालाम्बिहरुको संगमस्थल हो । हिन्दुहरु यस क्षेत्रलाई शिवको तपोभूमिको रुपमा लिन्छन् भने वौद्धधर्मालम्बिहरु बुद्धले पाइला टेकेको ठाउँको रुपमा लिने गरेको पाईन्छ तर, समिा विबाद र उचित प्रचार र आवश्यक पुर्वाधार नबन्दा पर्यटकिय तथा धार्मीमक महत्वको सैलुङ क्षेत्र ओझेल परेको छ ।
पहिला सैलुङ आउन काठमाडौँबाट आउनेले दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको सिमा वजार मुढेदेखिनै हिँडेर आउनु पर्ने र रामेछापको मन्थलीबाट २ दिन लाग्ने भए पनि अहिले स्थानीय सरकारको प्रयास तथा विभिन्न निकायको सहयोगमा सडक बनेका कारण सैलुङ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई सहज भएको छ ।
वडाकै पहलमा अहिले सैलुङमा सडक पुगेको छ । सानो सैलुङको वस्केबाट हेर्दा गौरी शंकर वारी पारी संगै बसेर उभिए जस्तै देखिन्छ । शैलुङमा पर्यटन मात्र नभएर यहाँ प्रसस्त मात्रामा जडीबुटी समेत पाइन्छ ।
लक्षित वर्ग पहुँचमा पुग्दै
विगतमा भन्दा निर्वाचन पछिको समयमा लक्षित वर्ग पहुँचमा पुग्न सफल भएका छन् । निर्वाचित जनप्रतनिधिले उहाँहरुको हरेक कामहरुलाई सहज तरिकाले गरि रहेका कारण उनिहरु पहुँचमा पसग्न सफल भएका हुन् ।
गौश्वारा जस्तो दलित र जनजाती भएको बस्तीलाई उचाइमा पुर्याउन उनले अहम भुमीका खेलेका छन् । गाउँमा शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको थियो । गाउँबाट १० कक्षा सम्म अध्ययन गर्न कै लागि पनि आफ्नो गाउँबाट ३ घण्टा हिंडेर टोरपुर जानु पर्ने बाध्यता हटेको छ । अहिले गाउँ मै ६ वटा विद्यालय बनि सकेका छन् ।
हिजोको समयमा हुनेखानेको पहुँचमा रहेको हिक्ष अहिल सबैको पहुँचमा छ । गाउँमा विकासमका काम हुन थाले संगै रोजगारका लागि अन्यत्र जान नपर्ने र हुनेखानेको घरमा काम गर्नु नै पर्ने बाध्यता समेत हट्दै गए पछि गौश्वारामा जनचेतना बढेको छ ।
गौश्वारामा यतिबेला जाँड रक्सी खाएर कोही मान्छे मातेको देखिन्न । दलित तथा जनजातीको बााहुल्यता रहेको गाउँमा शिक्षाको पहुँच पुगे सँगै र यहाँ सामाजिक चेतनाका लागि अग्र भएर लाग्ने टलक जस्तै युवाहरुको सक्रियतामा जाँड रक्सी नियत्रण भएको हो । हिजोका दिनहरुमा गाउँमा रक्सी खाएर झैझगडा नभएको दिन हुदैनथियो तर आज गाउँमा मान्छेहरुले जाड रक्सी खाएर होहल्ला गरेको देखिन्न ।
गाउँमा रक्सी निशेधको कुरा गरेर संभावना नभएका कारण निययन्त्रण गर्नका लागि जनचेतना जगाउन उनको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । तामङ, मगर र दलित बस्ती भएकै कारण पनि सामाजिक परम्परा जोगाउनका लागि रक्सी निशेध गर्न संभव नरहेका कारण यहाँका युवाहरुको साथमा उनले नियन्त्रणको पहल गरेका हुन् । अहिले चाडबाडमा रक्सी प्रयोग गरिने स्थानमा चिसो पेय पदार्थ प्रयोग हुन थाल्दा गाउँमा चेतना बढेको अनुभुती भएको उनले बताए । गौश्वारामा हरेक पर्व तथा कार्यमा रक्सीको प्रयोग न्युन हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँमा अहिले रक्सी चढाउनु पर्ने ठाउँमा चढाउन र पारीवारीक जमघटमा घर भित्र मात्रै प्रयोग भएको पाइन्छ । गाउँमा नशामा लठ्ठ भएर मुख छाड्ने तथा झैझगडा हुन छाडेको छ ।
वडा अध्यक्ष मगरले युवाहरुको लागि युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत विशेष गरि खेलकुदमा युवाहरुलाई सहभागि गराएको र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु ल्याइ रहेको कारण पनि युवा सक्रियता बढ्दै गएको छ ।
युवालाई पन्छाए विकास हुन्न
हरेक स्थानमा जनताको जन गुनासो सुन्ने खालका जनप्रतिधि भए सफल हुने उनि बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुमा युवा पुस्तालाई पन्छाउने कार्य भइरहे देशमा विकासका ढोकाहरु पुर्णरुपमा नखुल्ने मगरको ठम्याई छ । मगरले आफुले गरेका कार्यहरुमा कमीकमजोरी देखिएको अवस्थामा आफ्ना वडावासी नागरिकहरुालाई सुझाव सल्लाह दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
वर्तामान राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पछिल्लो समय व्यक्तीहाबी भएका कारण खिचातानी भएको र हरेक राजनीतिक दलका नेताहरुले जनगुनासो सुन्नु पर्ने उनको धारण छ । पछिल्लो नेपाली राजनीति घटनाक्रमले दिगो विकास र समृद्ध समाज सुखी नेपालीको नारा नाराम सिमीत हुने भएकोले राजनीतिकदलहरुले जनचाहना अनुसार काम नगरि रहेको उनले बताए ।
नेपालका हरेक स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले दोरम्वाको वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष टलकको काम हेरेर गाउँ विकासमा लाग्ने हो भने सँँच्चिकै हरेक गाउँहरुले काँचुली फेर्ने थिए । देश विकास समृद्ध समाज र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउनका लागि अन्य जनप्रतिनिधिले पनि मगरलाई पछ्याउने हो भने नेपाल साच्चै स्वर्गको टुक्रा बन्ने छ ।